अहंकारको वृक्षमा विनाशको फल लाग्छ : विश्वप्रकाश शर्मा | हिमालयन ट्रिबुन
२०७८ जेष्ठ ८, शनिबार ०१:३६
अहंकारको वृक्षमा विनाशको फल लाग्छ : विश्वप्रकाश शर्मा
HT २०७८ जेष्ठ ८, शनिबार ०१:३६
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले महाब्याधिका बेला राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मध्यावधिको रंगीन सपना महंगो पर्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार राति संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणापछि सामाजिक संजालमार्फत शर्माले यस्तो बताएका हुन् । उनले लेखेका छन्, ‘अहंकारको वृक्षमा विनाशको फल लाग्छ, सिंगो महाभारतको संक्षिप्त सार यत्ति हो ! बुझि राख्नु राष्ट्रपति महोदया र कमरेड प्रधानमन्त्रीजी, महाब्याधिका बेला मध्यावधिको रंगीन सपना महंगो पर्नेछ ! संविधानको सामूहिक बलात्कारको दुश्परिणाम महंगो पर्नेछ ।’
`अहंकारको वृक्षमा विनाशको फल लाग्छ´,
सिंगो महाभारतको संक्षिप्त सार यत्ति हो !
बुझि राख्नु रास्ट्रपति महोदया र कमरेड प्रधानमन्त्रीजि, महाब्याधिका बेला मध्यावधिको रंगीन सपना महंगो पर्नेछ ! संविधानको सामुहिक बलात्कारको दुश्परिणाम महंगो पर्नेछ l
— Bishwa Prakash शर्मा (@bishwaprakash77) May 21, 2021
सन्की प्रधानमन्त्री र मतियार राष्ट्रपतिले मुलुक अँध्यारो सुरुङमा हाले : गगन थापा
Spread the loveकाठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले सन्की प्रधानमन्त्री र मतियार राष्ट्रपतिले मुलुक अँध्यारो सुरुङमा हालेका बताएका छन् । संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि शनिबार सामाजिक संजालमार्फत थापाले महामारीमा त यस्तो अधर्म गर्न सक्ने देशघाती जोडी यहीँ र यत्तिमै रोकिने वाला नभएका बताएका हुन् । थापाले […]
२०७८ बैशाख २४, शुक्रबार १३:०८
थापा र देवकोटाद्वारा राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता
२०७७ चैत्र ३१, मंगलवार ०९:३१
एमसीसीसँगको सम्झौता पारित गर्नुपर्छ भनी संसदमा चिच्याउनेहरूलाई देशभक्त नेपालीले बुझौं
२०७८ जेष्ठ ३१, सोमबार १६:५५
जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापालाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज
२०७८ बैशाख २५, शनिबार १७:०७
संवैधानिक संरचनाको गरिमा समाप्त पार्ने मनसायको बैठकमा सहभागी नहुन प्रचण्डको आग्रह
२०७७ चैत्र ४, बुधबार ०८:३५
माधव नेपाल पक्षको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आजदेखि सुरु हुँदै